वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि मुछिए | News Nepal
>>मन्त्री हेरफेर छिट्टै, ६ मन्त्री हेरफेर हुने
>>एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक बोलाइयो
>>उपराष्ट्रपतिको आधिकारीक वेबसाइट राखियो गृहमन्त्रीको हातमा चुरोट भएको फोटो !
>>डाक्टरलाई रिस उठेपछि ‘कबीर सिंह’ माथि उजुरी हाले
>>उर्जामन्त्री पुनको प्रश्नको ट्वीटरमार्फत चिनियाँ राजदूतको कूटनीतिक जवाफ
वाइडबडी प्रकरणमा कांग्रेस सभापति देउवा पनि मुछिए
काठमाडौँ । शनिबारीय अंकसहित प्रकाशित पत्रिकाहरुमा आज विवेकशील साझा पार्टीको बिभाजन प्रमुख हेडलाइन बनेका छन् । त्यससँगै कान्तिपुर दैनिकले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज घोटाला प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि जोडिएको भन्दै मुख्य समाचार बनाएको छ ।
२०७४ जेठ २४ गते देउवा प्रधानमन्त्री भएको चार दिनपछि २९ गते वाइडबडी खरिदको रकम भुक्तानीका लागि सटही सिफासिरको निर्णय भएको थियो । त्यतिबेला देउवा नै पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए ।
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पठाएको विवरणमा २०७४ वैशाख २५ देखि चैत १ सम्म जितेन्द्र नारायण देव उड्डयन मन्त्री रहेको उल्लेख छ ।
नागरिक दैनिकले शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले निजी कलेजलाई सम्बन्धन नदिन प्रस्ताव गरेको समाचार छापेको छ । कार्यदलले शुक्रबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टका अनुसार सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले रकमको चलखेल गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई आफूखुशी म्याद थप्दै आएको छ । यसरी म्याद थप्दा एकारित मल चाहिने बेलामा किसानले चर्को अभाव बेहोर्छन् भने अर्कोतिर लाखौं रुपैयाँ घोटाला हुन्छ । ‘मलमा छल, आपूर्तिको म्याद थप्दै लाखौं डलर घोटाला’ शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोष्टले यो समाचार छापेको छ ।
नेपाल समाचार पत्र दैनिकले नेपालकै पहिलो नमूना त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको मुख्य समाचार छापेको छ । धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको तीन जिल्ला गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जाको संगमस्थल रिडीमा त्रिकोणात्मक झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न २०७१ सालमा सम्झौता भएको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘ठूला व्यवसायीको होटेल मोह’ शीर्षकमा शनिबार विशेष सामग्री प्रकाशित गरेको छ भने गोरखापत्र दैनिकले ‘पृथ्वीनारायण शाहको कामलाई सम्मान’ शीर्षकको मुख्य समाचार छापेको छ ।
प्रकाशित मिति : 2019-01-12
मन्त्री हेरफेर छिट्टै, ६ मन्त्री हेरफेर हुने
काठमाडाैं । सरकारमा रहेका मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हेरफेर हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष...
एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न बोर्ड बैठक बोलाइयो
काठमाडौं । एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न भन्दै आज दिउँसो बोर्ड बैठक बोलाइएको छ । परिक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार...
उपराष्ट्रपतिको आधिकारीक वेबसाइट राखियो गृहमन्त्रीको हातमा चुरोट भएको फोटो !
काठमाडाैं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन (पासाङ)का पुराना तस्बिरमा गृहमनन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल\_को हातमा चुरोट देखिएको छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको आधिकारीक...
डाक्टरलाई रिस उठेपछि ‘कबीर सिंह’ माथि उजुरी हाले
एजेन्सी । बक्स अफिसमा राम्रो व्यापार गरिरहेको फिल्म ‘कबीर सिंह’ को आलोचना पनि भइरहेको छ । फिल्म आलोचित हुनुको कारण...
उर्जामन्त्री पुनको प्रश्नको ट्वीटरमार्फत चिनियाँ राजदूतको कूटनीतिक जवाफ
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा चिनियाँ कम्पनीको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाए । गएराति नै...
बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा विप्लवका कार्यकर्ताद्वारा आगजनी
काठमाडाैं । कालिकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको कार्यालयमा विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ताले आगजनी गरेका छन् । गाउँपालिकाले बन्दको अवज्ञा गर्दै गाउँसभा...
सांसद प्रदीप यादव पार्टीबाट ६ महिनाकालागि निलम्बित, उनी भन्छन्ः यो खवर सुनेर आश्चार्य लाग्यो !
काठमाडौं । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवलाई पार्टी सदस्यबाट ६ महिनासम्मलाई निलम्बन गरिएको छ । लाटभियामा स्वतन्त्र तिब्बत माग गर्दै...
कुनैबेला प्रचण्डका उत्तराधिकारी मानिने विप्लवबारे प्रचण्डले चितवनमा यस्तो भावुक कुरा गरेपछि…
काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव छिट्टै मुलधारको राजनीतिमा आउने दाबी गरेका छन् । भरतपुर महानगरपालिकाको चाैथो...
विप्लवको बन्द कै दिन प्रचण्डले चितवनमा गराए सयाैं युवा पार्टी प्रवेश
चितवन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनमा ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई पार्टी प्रवेश गराएका छन् । पूर्वी चितवनका युवाहरुले...